UI design တွေဆွဲတဲ့အချိန်မှာ Maintainable ဖြစ်ဖို့နဲ့ စနစ်ကျနေဖို့အတွက် Design System လိုအပ်ပါတယ်။ Design System မရှိရင် ကိုယ်ဆွဲထားတဲ့ Design တွေမှာ အရောင်လေးတခုပြောင်းဖို့အတွက် ရှိသမျှ စာမျက်နှာတွေကို အကုန်လုံးကို တစ်ခုချင်းလိုက်ပြင်နေရတတ်တယ်။ ဒါဟာတကယ်တော့မဖြစ်သင့်ပါ။ Page နည်းတဲ့ Project တွေမှာ သိပ်မသိသာပေမယ့် Page တွေ ရာချီပြီး ရှိတဲ့ Project တွေဆိုရင် ဒုက္ခလှလှတွေပါပြီ။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်အနေနဲ့ UI တွေကို Design ဆွဲတဲ့အခါ Design System ကို အရင်တည်ဆောက်ပြီး ဆွဲတာက ကိုယ့်ရဲ့ Project ကို ပိုပြီးမြန်ဆန်စေသလို တခြား team…
When you run your Flutter you will see this. BUILD FAILED in 9s Running Gradle task 'assembleDebug'... Running Gradle task 'assembleDebug'... Done 11.0s [!] The shrinker may have failed to optimize the Java bytecode. To disable the shrinker, pass the--no-shrinkflag to this command. To learn more, see: https://developer.android.com/studio/build/shrink-code Gradle task assembleDebug failed with exit code 1
If you see this kind of error log, read continue Logs Launching lib/main.dart on iPhone X in debug mode... Running Xcode clean…
Remove all Pod Folder, Podfile, and Podfil.lock from <ios folder> and then run flutter clean After that only run with this command first before click on “run” button of IDE flutter run
Run this commands on terminal. rm -rf ~/.cocoapods/repos/trunk/ rm rf ~/.cocoapods/repos/Spec_Lock
Json Error On Mac Os
Go to your terminal and type all those commands gem list — local | grep cocoapods sudo gem uninstall cocoapods sudo rm -rf ~/.cocoapods sudo gem install cocoapods
မည်သူမှ မွေးကတည်းက ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု အပြည့်မပါ ကြပါဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိဖို့ဆိုတာ မိမိကိုယ်တိုင် တည်ဆောက် ရယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုအားနည်းတဲ့အခါ မိမိကိုယ်ကို သိမ်ငယ်တာမျိုး၊ ကိုယ်လုပ်လိုက်ရင် မှားများ မှားသွားမလားဆိုတဲ့ တွေဝေဒွိဟ စိတ်တွေကိုလည်း တိုးပွားစေပါတယ်။ အရာရာဟာ “တန်ဆေး၊ လွန်ဘေး” ဆိုတဲ့အတိုင်း မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုလွန်ကဲနေလျှင်လည်း မကောင်းပေ။ ဒီဆောင်းပါးလေးမှာတော့ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု အားနည်းနေသူတွေအတွက် ဘယ်လို တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်သလဲဆိုတာလေးတွေကို တင်ပြပေးသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။…
ဘယ်နေ့မှာ ဘာလုပ်မယ်၊ ဘယ်အချိန်မှာ ဘာလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ Plan တွေချဖူးကြမှာပါ။ သို့သော်လည်း မိမိ Plan အတိုင်းလုပ်ဖြစ်တာက ပထမ ၁ရက် ၂ရက် (သို့) ၁ ပတ်၊ ၂ ပတ်လောက်သာ ကြာပြီး နောက်တော့လည်း ဒုံရင်းပဲ ပြန်ဖြစ်သွားတာမျိုးလည်း ဖြစ်ဖူးကြပါလိမ့်မယ်။ ဒီဆောင်းပါးလေးမှာတော့ ကိုယ့်ရဲ့ Plan တွေကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ အလုပ်ဖြစ်အောင် ဘယ်လိုဆွဲရမလဲဆိုတာလေးကို ဖော်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၁။ မိမိလုပ်စရာရှိတဲ့ အလုပ်တွေ အကုန်လုံးကိုချရေးပါ
<ZawGyi> လုပ္စရာေတြကမ်ားၿပီး အလုပ္ေတြကမၿပီးျဖစ္ေနရင္ ဒါေလးကို စမ္းၾကည့္လိုက္ပါ။ သင့္အေနနဲ႔ ဘယ္အလုပ္ကိုစၿပီး လုပ္ရမွန္းမသိျဖစ္ေနတဲ့အခါ အခုခ်က္ခ်င္းလုပ္လို႔ရတဲ့ဟာကေန စလိုက္ပါ။ ဘာမွမလုပ္တာထက္စာ အလုပ္ေတြပိုၿပီး ၿပီးေျမာက္သြားတာေပါ့။ * * * သင့္ရဲ႕ထင္ျမင္ခ်က္ေလးကိုလည္း မွတ္ခ်က္ေလးေတြ ေရးေပးသြားအုံးေနာ္! <Unicode> လုပ်စရာတွေကများပြီး အလုပ်တွေကမပြီးဖြစ်နေရင် ဒါလေးကို စမ်းကြည့်လိုက်ပါ။ သင့်အနေနဲ့ ဘယ်အလုပ်ကိုစပြီး လုပ်ရမှန်းမသိဖြစ်နေတဲ့အခါ အခုချက်ချင်းလုပ်လို့ရတဲ့ဟာကနေ စလိုက်ပါ။
VECTOR Online Learning Platform